Momba anay | Haiyan Jiaye Machinery Tools Co, Ltd.
IZA IZAO IZAO?
Haiyan Jiaye Machinery Tools Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2003. Izahay dia matihanina amin'ny famokarana sy fivarotana fitaovana fananganana maro isan-karazany: ny hidro hydraulic, fitaovam-pitandremana fiara, fitaovana fanamboarana môtô ary fitaovana ara-motera.
Haiyan Jiaye - serivisy kalitao ho anao
Nahazo ny kaomisiona momba ny kalitao ISO9001 izahay ary ny ankamaroan'ny vokatrao dia manana taratasy fanamarinana CE.
Ny vokatra avy any amintsika dia aondrana manerana izao tontolo izao. Nandritra ny taona fandrosoana, lasa fikarohana, fikarohana, famokarana ary varotra miaraka any ivelany isika.
Ny finoan'ny orinasa dia "kalitao voalohany, fanavaozana ara-teknika, serivisy tsara ary serivisy haingana".
Ny orinasa anay dia ao amin'ny Haiyan Economic Development Zone, Zhejiang Province, izay eo akaikin'ny Bridge Bridge Hangzhou. Izahay dia eo afovoan'i Shanghai, Hangzhou sy Ningbo. Ny fitaterana eto dia tena mety. Manentana am-pahatsorana ny mpanjifa hitsidika ny orinasanay izahay. Matokia anay, safidy tsara indrindra izahay!
INONA NO AZONAO ATAO ANAO?
Ny tanjonay dia ny hamorona marika ambony, vokatra avo lenta ary serivisy kilasy ambony eo amin'ireo mpifaninana
Mba hanomezana anao jack hydraulic, fitaovana fikojakojana fiara, fitaovana fanamboarana môtô ary fitaovana hafa auto.
Any amin'ny Fampandrosoana ara-toekarena Haiyan, Faritanin'i Zhejiang, mifanakaiky amin'ny tetezana Hangzhou Bay, fitaterana mety
NY SITRISITRA itokisana
Haiyan JIAYE dia manana traikefa 17 taona amin'ny indostrian'ny famatsiana fitaovana famokarana mekanika, ampahafantaro anay ny momba anao mila tsara kokoa ianao. Afaka manome vahaolana sy fanampiana azo tanterahina izahay, mba hanomezana ny zavatra ilainao avy amin'ny faritra samihafa. Azafady mba mifandraisa aminay:
hydraulic Garage Jack , Car Creeper , Fitaovana otomotika, hydraulic Garage Jack 3ton , 3ton hydraulic Garage Jack , fanamboarana Tools ,